भिडियो Archives - Kanchan Post
झापा : पछिलो समय द्रशकको मन जित्न सफल कलाकार भुवन खड्काद्वारा अभिनित मायाको सम्बन्ध म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उन ले हाल सम्म सानो तथा ठुलो पर्दाका दर्जनौ चलचित्र म्युजिक भिडियो र टेलिशृङखलमा काम गरि सकेका छन। खड्का सँखुवासभामा जन्मिए र धनकुटा मा वाल्याकाल विताए पनि हाल झापा मा नै रहेर कलाकारीतामा सँङघ्रस गरिरहेका छन। उनी भन्छन स्थानिय स्थरमा रहेर स्थानीय स्...
सोमबार, मंसिर ०६, २०७८
दमक ७ हाटखोलामा डोजर लगाएर सुकुम्बासी बस्तीको घर भत्काइयो ( भिडियो सहित )
झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगर झापाको दमकमा डोजर लगाएर सुकुम्बासी बस्तीको घर भत्काइएको छ । दमक वडा नम्बर ७ मा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै दमक नगरपालिकाले डोजर चलाएको हो । दमकका मेयर रोमनाथ ओलीले अटेरी गरेर बसेका व्यक्तिका घरलाई डोजर लगाइएर भत्काइएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म २० वटा घर भत्किएको छ ।’ त्यसक्रममा स्थानीयले विरोध गर्न सक्ने भ...
गायक सन्दिप न्यौपाने र गायिका संझना भण्डारीको स्वरमा समावेश ‘सान्बाबु’ सार्वजनिक भएको छ । सन्दिप न्यौपानेको यो गीतमा शब्द तथा संगीत छ । यो गीतको भिडियोलाई प्रकाश भट्टले कोरियोग्राफी तथा निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा नवराज उप्रेतीको छायांकन छ । भिडियोमा सन्दिप न्यौपानेको साथमा समारिका र स्मारिका ढकालको अभिनय छ । भिडियोलाई बिष्णु शर्माले सम्पादन गरेका हुन् । h...
‘कहिँ तिम्ले जित्यौ´ म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ( भिडियो सहित )
दमक : गायक सन्देश सारु मगरको ‘ कहिँ तिम्ले जित्यौ ’ नामक गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सुजन पोखरेल नामक युट्युब च्यानलमार्फत उक्त भिडियो आज सार्वजनिक गरिएको छ। मणि खतिवडाको शब्द रचना रहेको उक्त गीतमा मनोज राज सिवाकोटीले संगीत भरेका छन्। भिडियोको मुख्य भूमिकामा बिनोद शंखर सहित सृजना श्रेष्ठ , बिकम गौतम , आशिष थापा देखिएका छन्। भिडियोको छायांकन सुजन श्रेष्ठले गरेको...
ईस्वर दुलालको निर्देशनमा ‘नाटकै हो नैटंकीनै हो’टाईटलमा बन्यो हास्य ब्याङ्ग छोटो चलचित्र
मोरङ। नेपाली कमेडि भिडियोको निर्माण हिजोआज निक्कै बडेको पाईन्छ । दर्सकहरुलाई मनोरन्जन दिनका लागी यस्ता प्रकारका भिडियोहरुको निर्माण बढेको हो । सोहि अनुरुप मनिष पिक्चर नामकयुट्युव च्यानल माफर्त नाटकै हो नैटंकीनै हो, हास्यब्याङ् भिडियो सावजनि भएको छ । भिडियोमा प्रदेश सांसदहरुलाई चेटिलो ब्याङ्ग गरीएको छ । यसका निर्देशक ईस्वर दुलाल हुन् । भिडियोमा भवानी...
खत्रा तिम्रो आँखा कान्छि सार्वजनिक ….
सानु माया ….
शुक्रबार, फाल्गुण २७, २०७३
ओ माइ गड हाइट चांही हुनै पर्छ – कोवीशा श्रेष्ठ
“ओ माइ गड हाइट चांही हुनै पर्छ” यस्तै भनिरहेकी थिईन कोवीशा श्रेष्ठ(२२) ले । तर अहिले सम्म ब्वाइफ्रेन्ड भने छैन उनको । बनाउने सोचमा छु उनि भन्छिन् तर म संग केटाहरु खुबै डराउंछन् किन हो थाहा छैन । घरमा उनलाई मायाले सवै कबु भनेर बोलाउने गर्छन । एक्ली छोरी भएकाले पनि होला उनले हांस्दै भनिन् म चार दाजुभाईको एक्ली चेली हुं । उचाई ५ फिट ४ इन्चकी धनी दोलखाकी कोवीशा अहिले भने सोह्रखुटेम...
शनिबार, जेठ २३, २०७२